လရိပ်အိမ်: February 2013
Posted by လရိပ်အိမ် at 1:50 PM 10 comments:
ဒီတလော စာတွေမရေးနိုင် ၊ ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိ ၊ အလုပ်ကလိုချင်တာ။ တရုတ်နှစ်ကူးပြီးရင် အလုပ်ရှာမယ်လို့ အားခဲထားသမျှ နေမကောင်းတဲ့ထဲ ရောက်သွားတယ်။ နဂိုက လက်အတွက် ဆေးတွေသောက်နေတာ တနေ့၃ခါ။ တုပ်ကွေးဖြစ်လိုက်တော့ သောက်တဲ့ဆေးက တနေ့၎ခါ ၊ အားလုံး ၇ ခါ။ တုပ်ကွေးသောက်တဲ့ဆေးက တခါသောက်ရင် ၇မျိုး။ လက်အတွက် သောက်တဲ့ဆေးနဲ့ရောသောက်လို့မရလို့ တနေ့တနေ့ အချိန်ကြည့်ပြီးသောက်နေရတာ။ လူက နုံးပြီးတော့ဘဲ အိပ်ချင်နေတာ။ သူများဘလော့တွေထဲတော့ သွားလည်တယ်။ ကိုယ့်ကိုဘဲ စာတွေမရေးနိုင်တာ။
ညီမလေးတစ်ယောက်ကို မွေးစားချင်တာ ၊ သူကငြင်းလိုက်တော့ ကိုယ်လဲဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး။ အမတွေအားလုံးကို ညီမလေးက ညီတူညီမျှ ခင်ပါတယ်တဲ့။ ညီမလေးဆီက ထွက်ကျလာတဲ့ စကားလုံးလေးတွေပါ ၊ မမဘက်ကို နဲနဲတိုးပေးပါလားဆိုတော့ မေတ္တာဆိုတာက လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်လို့ရတဲ့ ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဟုတ်တာပေါ့ ၊ ဒါပေမဲ့ ညီမလေးမှာလဲ ညီမလေးချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေရှိနေမှာဘဲ ၊ သူတို့တွေကလဲ ညီမလေးရဲ့စိတ်နဲ့ထပ်တူချစ်ခင်ပါစေလို့ မမ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မမလဲ ညီမလေးကို သံယောဇဉ်တွေ အရမ်းမငြိတွယ်ခင်မှာ သူများတွေလို တန်းတူဖြစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်လို့ ပြောမိတယ်။ ညီမလေး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလားဟင်။
အရင်လို ဖေ့ဘုတ်တက်ရတာ လန်းဆန်းတက်ကြွမှုတွေ မရှိပြန်တော့ဘူး။ ညီမလေး မက်ဆေ့မှာ စာတွေသွားရိုက်လဲ ပြန်ရိုက်ချင်မှ ရိုက်တော့တယ်။ ကိုယ့်ကိုပိုခင်စေချင်တာလေ ၊ ပြောလိုက်မှဘဲ အဲလိုတွေဖြစ်ကုန်ရော။ အဲဒီအတွက်လဲ ရင်ထဲမှာ ခံစားနေရပြန်ရော။ ညီမလေးနဲ့တွေ့တုန်းကတော့ ဖေ့ဘုတ်ကို စွဲလန်းနေခဲ့တယ် ၊ ခုတော့လဲ ဖေ့ဘုတ်က သူ့ဟာသူ အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နေလေရဲ့။
ညီမလေး ဘဝတလျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
Posted by လရိပ်အိမ် at 3:24 PM 10 comments:
တပို့တွဲ ရဲ့ ရိုးမြေကျ
ညီမလေး ရိုးမြေကျ မွေးနေ့အမှတ်တရ
အဆင့် - ၁ ကမဆင်းတဲ့
ကဗျာတွေ ၊ စာတွေ ၊ ဝတ္ထုတွေ
*ခုမှသေချာကြည့်မိတယ် ၊ မွေးတဲ့နေ့နဲ့တူတဲ့နှစ်ဘဲ။
ညီမလေး ရိုးမြေကျ ချစ်ခင်ရသူနဲ့ ထာဝရပျော်ရွှင်ပါစေလို့
Posted by လရိပ်အိမ် at 12:10 AM 11 comments:
ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ယူအလေးထားရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းက ရွတ်ဆိုခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေးပေါ့။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ မှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ
၁၉၁၅ ရှေ့နေ ဦးဖာ သား
ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ပြောတဲ့ ညီညွတ်ရေး
ပါးစပ်က ပြောရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ ပါးစပ်က ညီညွတ်ချင်ပါတယ် ပြောလို့ မဖြစ်ဘူး။ အလုပ်မှာလည်း တူရမယ်။ အကျိုးမှာလည်း တူရမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်း တူရမယ်။ အဲဒါမျိုးကိုမှ ညီညွတ်ရေးလို့ ခေါ်ထိုက်တယ်။
"ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ပြောတဲ့ ညီညွတ်ရေး"ကိုလဲ ဘယ်ဘလော့က ကူးလာမှန်းမမှတ်မိတော့ပါ။
တင်သွား၊ရေးသွားတဲ့ စီနီယာဘလော့ဂါများကို ဒီနေရာကနေ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီနေရာကနေဘဲ တင်ခွင့်ပြုပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
***ယနေ့ခေတ်လူငယ်များ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မမေ့ကြစေချင်ပါ။
အားလုံးက ဗယ်လင်တိုင်းနေ့ကိုဘဲ ကျော်ကြည့်နေကြသလိုဘဲ။
Posted by လရိပ်အိမ် at 3:45 PM4comments:
အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်မှသည် ပင်လုံစာချုပ်ဆီသို့ . . . ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ တို့မမေ့
လွတ်လပ်ရေးရရှိရန်အတွက် မြန်မာပြည်မနှင့် တောင်တန်းသားများ၏ စည်းလုံးမှုကိုပြဆိုခဲ့သည့် ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သော ၁၉၄၇ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ကို ပြည်ထောင်စုနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျအင်္ဂလိပ်လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့သည့်ကာလနောက်ပိုင်းမှစတင်ပြီး မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် ခေတ်အဆက်ဆက်မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များက ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။ ဗြိတိသျအစိုးရအနေဖြင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ လွတ်လပ်ရေးမပေးရရန်အတွက် နည်းမျိုးစုံဖြင့်ဟန့်တားခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ဟန့်တားမှုများတွင် ပြည်မနှင့်တောင်တန်းဒေသများ(တစ်နည်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း)ကို သွေးခွဲအုပ်ချုပ်သည့်နည်းဖြင့်လည်း အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဗြိတိသျအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးသည့်နောက် တောင်တန်းဒေသများကို သီးခြားစီမံကိန်းဒေသများအဖြစ် ဘုရင်ခံကတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ပြီး ဒေသတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကူးသန်းမှုကို ၁၈၉၈ ကချင်တောင်တန်း လူမျိုးစုဥပဒေ၊ ၁၈၉၆ ချင်းတောင်တန်းဥပဒေ အစရှိသည်တို့ဖြင့် ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။ ထိုသို့သော သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ထားမှုများက လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုအရှိန်မြင့်ချိန်တွင် ပို၍ရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ၁၉၄၇ ဇန်န၀ါရီလ လန်ဒန်ခရီးစဉ်တွင် ပြည်မနှင့်တောင်တန်းပူးပေါင်းရေးကိစ္စမှာ အရေးပါးလာသောကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ပြည်မနှင့်တောင်တန်း မပူးပေါင်းနိုင်ရန်အတွက် ဗြိတိသျအစိုးရမှ နည်းမျိုးစုံသုံးကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့သောအခက်အခဲများရှိနေသည့်ကြားကပင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် လွတ်လပ်ရေးအတွက် ခိုင်မာသောပြင်ဆင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြည်မနှင့်တောင်တန်းဒေသပေါင်းစည်းရေးအတွက် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သော ပင်လုံစာချုပ်ကိုလည်း ၁၉၄၇ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းဒေသ၏ ဗဟိုချက်ဖြစ်သော ပင်လုံမြို့တွင်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်းက လွတ်လပ်ရေးအပြည့်အ၀ရရှိရန်အတွက် လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ်ကာလများအတွင်း အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်နှင့် ပင်လုံစာချုပ်ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သောနေ့ရက်များကို ပြန်လည်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၁၉၆၅ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက်နေ့ထုတ်၊ ရန်ကုန်သတင်းစာမှ....
၁၉၄၇၊ ဇန်န၀ါရီလ ၉ - ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် အချို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ။
၁၉၄၇၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၀ မှ ၁၆ - ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်မှကြီးမှူး၍ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် လွတ်လပ်ရေး ဆန္ဒနှင့်အင်အားပြပွဲရက်သတ္တပတ်ဆင်နွှဲ။
၁၉၄၇၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၃- မြန်မာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့နှင့်ဗြိတိသျအစိုးရတို့ လန်ဒန် မြို့ အမှတ်-၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်းရှိ ဗြိတိသျနန်းရင်းဝန်ရုံး၌အစည်းအဝေး ပြုလုပ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၊ သခင်မြ၊ ဦးဘဖေ၊ ဦးတင်ထွဋ်၊ သခင်ဗစိန်၊ ဦးစောတို့ ပါဝင်ပြီး ဗြိတိသျဘက်မှနန်းရင်းဝန်ကြီး အက်တလီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဆာ စတက်ဖို့ကရစ်တို့တက်ရောက်။
၁၉၄၇၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၅ - မြန်မာကိုယ် စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ဗြိတိသျကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့တို့ အစည်းအဝေးပြုလုပ်၊ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏အထွေထွေ ကြေညာချက်ကိုတင်သွင်း။
၁၉၄၇၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ - ပဒေသရာဇ် ရှမ်းပြည်နယ် စပ်ဖများကောင်စီက မြန်မာနိုင်ငံဘုရင်ခံဆာဟူးဘတ်ရန့်စ်မှ တစ်ဆင့်ဗြိတိသျအစိုးရထံ'ရှမ်းပြည်နယ် များကိစ္စ အမှာစာ ၁ နှင့် ၂ ကို ပေးပို့။ (လန်ဒန်ဆွေးနွေးပွဲကာလအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ပဒေသရာဇ်စော်ဘွား အချို့မှဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ရှမ်း စော်ဘွားများ၏ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်၊ တောင်တန်းနယ်များ၏ကိစ္စကိုဆွေး နွေးရန် ရှမ်းစော်ဘွားများကို သီးသန့် ဖိတ်ကြားရန်ကြေးနန်းစာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့။ ထိုကြေးနန်းစာကြောင့် ဗြိတိသျအစိုးရနှင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တို့ဆွေးနွေးပွဲမှာ မပြေမလည်ဖြစ်ခဲ့၊ ရှမ်းပြည်နယ်မှ ဦးတင်အေး၊ ဦးထွန်း မြင့်၊ ဦးဖေခင် စသည့်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်လူငယ်များကတောင်ကြီး မြို့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်လူထုအစည်း အဝေးကြီးကိုခေါ်ယူကျင်းပပြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်လူထု၏ကိုယ်စားလှယ်အစစ် အမှန်ဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ လန်ဒန်သို့ ကြေးနန်းရိုက်ပို့ခဲ့။ ထို ကြေးနန်းစာရောက်ရှိပြီးမှလန်ဒန်ဆွေး နွေးပွဲဆက်လက်ပြုလုပ်)
၁၉၄၇၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ - ဘကြီးဘဘေ (ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်၊ ဘုရင်ခံအမှုဆောင် ကောင်စီဝင်) အင်္ဂလန်သို့ ထွက်ခွာ။
၁၉၄၇၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ - အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုး။သဘောတူညီချက်၏ နောက်ဆက်တွဲ ကို ဦးစောနှင့်သခင်ဗစိန်တို့ကသဘော မတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး။ အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်တွင် အချက် ၁၅ ချက်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ထိုစာချုပ် သည်မြန်မာနိုင်ငံကိုလုံးဝလွတ်လပ်ရေး ပေးသည့်စာချုပ်မဟုတ်သေးသော်လည်း မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ခိုင်မာ စွာကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဗြိတိသျ- မြန်မာသဘောတူညီချက်ဖြစ်။
၁၉၄၇၊ ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ - ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းဦးဆောင်သည့် မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လန်ဒန်မှ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာ။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ -ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းဦးဆောင်သည့် မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိ။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ မှ ၁၃ - ဒုတိယပင်လုံ အစည်းအဝေးကျင်းပ၊ ပထမပင်လုံ အစည်းအဝေးကို ၁၉၄၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁ မှ ၁၂ အထိကျင်းပခဲ့။ ပထမအကြိမ် ပင်လုံအစည်းအဝေးသို့ သခင်နု၊ ဦးဘဂျမ်းနှင့်မန်းဘခိုင်တို့ကဖဆပလ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တက်ရောက်။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ - ညပိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှ အောင်ဆန်း အက်တလီ သဘောတူညီချက်ကို ဖဆပလအမှုဆောင်အစည်းအဝေး၌ တင်ပြ။ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တို့ ဆွေး နွေးပြီး သဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံ ကြောင်းဆုံးဖြတ်။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ - ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းမှ ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်သို့ သတင်းစာဆရာများကို ဖိတ်ကြားပြီး လန်ဒန်၌ပြုလုပ်ခဲ့သော လွတ်လပ် ရေးဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းရှင်းလင်း။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ - အောင်ဆန်း အက်တလီစာချုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှ တိုင်းပြည်သို့ အသံလွှင့်အစီရင်ခံ။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ - ကရင်ဗဟိုအဖွဲ့ ချုပ်မှကြီးမှူး၍ ကရင်ညီလာခံသဘင် ကျင်းပပြီး အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်သည် ကရင်အမျိုးသားတို့၏ အခွင့်အရေးကို ထိပါးနစ်နာစေသဖြင့် ကန့်ကွက်ကြောင်းဆုံးဖြတ်၊ ကန့် ကွက်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံဘုရင်ခံမှ တစ်ဆင့်ဗြိတိသျနန်းရင်းဝန်ထံပေးပို့။ ညီလာခံတွင်လည်းစောဘဦးကြီးအား ဘုရင်ခံ၏အမှုဆောင်ကောင်စီမှ နုတ် ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ - တောင်တန်းဒေသ သဘောထားစုံစမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘုရင်ခံနေအိမ်တွင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ်ပြုလုပ်။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ - ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပနေစဉ်အတွင်း တောင်တန်း သားများစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (Supreme Council of United Hill People/SCOUHP) ကို ဖွဲ့စည်း။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ - ရှမ်းစော်ဘွားများ နှင့် ရှမ်းပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ ပူးပေါင်း၍ရှမ်းပြည်ကောင်စီအမှုဆောင် အဖွဲ့(Shan State Council)ဖွဲ့စည်း။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ - ပင်လုံညီလာခံသို့ တက်ရောက်ရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပင်လုံသို့ ရောက်ရှိ။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ - ဗြိတိသျဒိုမီနီယံ ရေးရာလက်ထောက်အတွင်းဝန် ဘော် တွမ်မလီ၊ မစ္စတာ လက်ဝဒ်ခ်ျ၊ ဂျွန် လေဒင်တို့ ပင်လုံသို့ရောက်ရှိ။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ မှ ၁၁ - ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့်တောင်တန်းဒေသခေါင်း ဆောင်များ အပြင်းအထန်ဆွေးနွေး။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ - ဘုရင်ခံ အမှု ဆောင်ကောင်စီဝင်အဖွဲ့မှ သခင်ဗစိန် နှုတ်ထွက်။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ - ပင်လုံသဘော တူစာချုပ်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ၂၂ ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့။ ပင်လုံစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော ခေါင်းဆောင် (၂၃)ဦးမှာ-
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ - ဘုရင်ခံအမှု ဆောင်ကောင်စီဝန်အဖြစ်မှ ဦးစော နှုတ်ထွက်။
၁၉၄၇၊ ဧပြီလ ၉ - ဗြိတိသျပါလီမန် က ပင်လုံစာချုပ်ကို အတည်ပြု။
ကိုးကား။ ပင်လုံစစ်တမ်း(ဦးအုန်းဖေ)၊ ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ(ဦးပုလေး)၊ တပ်မတော်သမိုင်း- တတိယတွဲ(၁၉၄၅-၁၉၄၈)၊ ၂၀ ရာစု မြန်မာ့သမိုင်းကို ပြောပြနေသောရက်စွဲများ(သန်းဝင်းလှိုင်)နှင့် အခြား စာတမ်း၊ စာစောင်၊ သတင်းစာများ။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံစာချုပ် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
Dated the 12th February 1947
၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံစာချုပ် (မြန်မာဘာသာ)
မြန်မာပြည်ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီမှ အဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် စပ်ဖများအားလုံးတို့အပြင် ရှမ်းပြည် နယ်များ၊ ချင်းတောင်တန်းဒေသများနှင့် ချင်းတောင်တန်းဒေသတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များတို့ တက်ရောက်ကြသော ပင်လုံမြို့တွင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးကြီးတရပ်တွင် ကြားဖြတ်မြန်မာအစိုးရနှင့် ချက်ချင်းပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့် ရှမ်း၊ ကချင်နှင့် ချင်းတို့သည် လွတ်လပ်ရေးကို ပိုမို၍ လျှင်မြန်စွာ ရရှိလိမ့်မည်ဟု အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အဖွဲ့ဝင် တို့သည် ကန့်ကွက်သူမရှိဘဲ အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူညီကြလေသည်။
၁။ တောင်တန်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (တစညဖ) ၏ ကြိုးကိုင်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် များ၏ ထောက်ခံချက်အရ တောင်တန်းသားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်တဦးကို ဘုရင်ခံကရွေးချယ်၍ နယ်စပ်ဒေသများကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ဘုရင်ခံ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ခန့်ထားရမည်။
၂။ ဤအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် ဌာနလက်ကိုင်မရှိ ကောင်စီဝင် တဦးအဖြစ်ခန့်ထား၍ ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြည်ပကိစ္စရပ်များတွင် ထုံးနည်းဥပဒေအရ အမှုဆောင် ကောင်စီ၏ အာဏာလက်အောက်သို့ ရောက်ရှိသည့်နည်းတူ နယ်စပ်ဒေသကိစ္စများကိုလည်း အမှုဆောင်ကောင်စီ၏ အာဏာအောက်သို့ ရောက်ရှိစေရမည်။
ဤနည်းလမ်းများအတိုင်း နယ်စပ် ဒေသဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာကို ပေးအပ်ရမည်။
၃။ အဆိုပါ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ၎င်းနှင့် လူမျိုးချင်း မတူသော ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံနှစ်ဦးက ကူညီ စေရမည်။ ရှေးဦးစွာ ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့သည် ၎င်းတို့အသီးသီး သက်ဆိုင်သည့် နယ်များ၏ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်၍ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှာ အခြား နယ်စပ်ဒေသ အားလုံးတို့၏ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ထုံးနည်းဥပဒေအရ တွဲဖက်တာဝန်ယူရသည့်မူအတိုင်း ရွက်ဆောင်စေရမည်။
၄။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် အဖွဲ့ဝင်လူကြီးအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ များ၏ တဦးတည်းသော ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် နယ်စပ်ဒေသများနှင့် သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကြသည့်အခါ အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် တက်ရောက်နိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
၅။ အထက်တွင် သဘောတူညီသည့်အတိုင်း ဘုရင်ခံ၏အမှုဆောင်ကောင်စီကို တိုးချဲ့မည် ဖြစ်သော်လည်း နယ်စပ်ဒေသများ၏ နယ်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ယခုခံစားနေရသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို မည်သည့် နည်းနှင့်မဆို တစုံတရာ လက်လွတ်စေရန် အဆိုပါကောင်စီက ပြုလုပ်ခြင်းမရှိစေရ။ နယ်စပ်ဒေသများ အတွက် နယ်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ရာခိုင်နှုန်းအပြည့် ရှိစေရမည်ဟူသောမူကို သဘောတူညီကြသည်။
၆။ ပူးပေါင်းထားပြီးသည့် မြန်မာပြည်အတွင်း သီးသန့် ကချင်ပြည်နယ်တခု နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်၍ တည်ထောင်ရန် ပြဿနာမှာ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သော်လည်း ဤကဲ့သို့ သီးခြားပြည်နယ်တခု ထားရှိသင့်ကြောင်းကို သဘောတူညီကြသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက် အထမြောက်ရန်အလို့ငှာ ပထမခြေလှမ်းအနေဖြင့် ၁၉၃၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အက်ဥပဒေအရ နောက်ဆက်တွဲစာရင်းပါ အပိုင်း (၂) ဒေသများကဲ့သို့ မြစ်ကြီးနားနှင့် ဗန်းမော်ခရိုင်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် နယ်စပ်ဒေသ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်အား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမည်။
၇။ နယ်စပ်ဒေသများ၏ နယ်သူနယ်သားတို့သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် အခြေခံများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသော အခွင့်အရေးများတို့ကို ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
၈။ ဤစာချုပ်တွင် သဘောတူကြသည့် အစီအစဉ်မှာ ပဒေသရာဇ် ရှမ်းပြည်နယ် နယ်မြေစုတွင် ယခု အပ်နှင်းထားပြီးသော ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို ထိခိုက်ခြင်း မရှိစေရန်။
၉။ ဤစာချုပ်တွင် သဘောတူညီကြသည့် အစီအစဉ်မှာ မြန်မာပြည် အခွန်တော်ငွေများမှ ကချင် တောင်တန်းနယ်များနှင့် ချင်းတောင်တန်းနယ်များက ရသင့်ရထိုက်သော ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီကို ထိခိုက်ခြင်း မရှိစေရ၊ မြန်မာပြည်နှင့် ပဒေသရာဇ် ရှမ်းပြည်နယ်မြေစု၏ ဘဏ္ဍာရေး အစီအစဉ်များကဲ့သို့ ကချင်တောင်တန်းနှင့် ချင်းတောင်တန်းများအတွက် အလားတူအစီ
အစဉ်များကို ထားရှိကျင့်သုံးရန် ဖြစ်နိုင်မည်၊ မဖြစ်နိုင်မည်ကို ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီက နယ်စပ်ဒေသများ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် အတူ စစ်ဆေးကြည့်ရှုရမည်။
ဦးလွှာမှုန်း (အေတီအမ်။ အိုင်တီအက်(စ်)အမ်၊ ဖလမ်း)။
ဦးသောင်ဇာခပ် (အေတီအမ်၊ တီးတိန်)။
ဦးကွယ်မန်း (အေတီအမ်၊ ဟားခါး)။
ဦးဖြူ (သထုံစပ်ဖလုံ၏ ကိုယ်စားလှယ်)၊
ထို့နေ့ကား (၁၉၄၇) ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တည်း။
ပင်လုံစာချူပ်အား ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း လက်မှတ်ရေးထိုးနေစဉ်။
*****လရိပ်ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူများဘလော့တွေဆီကနေ ကူးပြီး တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဘယ်ဘလော့ကကူးခဲ့သည်ကို မမှတ်မိတော့ပါ။ ၂ နှစ်လောက်ကြာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ရေးခဲ့သော စီနီယာဘလော့ဂါများကို ဒီကနေဘဲ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။
မနက်အစောကြီးတင်ရမှာ ၊ အိမ်ကိုခုမှပြန်ရောက်လို့ ခုမှဘဲ တင်လိုက်ရပါတော့တယ်။
Posted by လရိပ်အိမ် at 6:31 PM3comments:
HAPPY BIRTHDAY FOR SOMEONE!
နင့်ကို ငါ ...........
ကလေး သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ နင့်အတွက် နင်နဲ့နင်ချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက် အမြန်ဆုံးရပါစေနော်။ ( မွေးနေ့ဆုတောင်း )
Posted by လရိပ်အိမ် at 11:29 PM 16 comments:
Labels: ရင်တွင်းဖြစ်ကဗျာများ, အမှတ်တရ
ပူသလို အေးသလိုနဲ့ စိတ်တွေကိုမြူတဲ့
ပူနေတဲ့ လူကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့ လရိပ်
ညအမှောင် ထွန်းလင်းစေတဲ့ လရိပ်
အနေအေးပြီး အဖော်မင်တဲ့ လရိပ်
ဒါလဲပဲ လရိပ် စိတ်မဆိုးပါတဲ့လေ
Posted by လရိပ်အိမ် at 10:20 AM 8 comments:
ညီမလေး ရိုးမြေကျ ရေးပေးသော ကဗျာ
#သူတင်ပေးသော ကဗျာကို နဲနဲ ကွန်ပလိမ့်တက်လိုက်တာ စိတ်ကောက်သွားတယ်။ ဖျက်မယ်တကဲကဲလုပ်နေတာ။
ကုမ်ရာသီဖွားများ စိတ်ကောက်တတ်သလားလို့ စာရင်းကောက်ယူရမလိုဖြစ်နေပြီ။
မွေးနေ့ကဗျာကို စေတနာနဲ့တင်ပေးသောညီမလေးရိုးမြေကျ၏ စေတနာကို ဝေဒနာ ဖြစ်အောင်လုပ်မိတဲ့အတွက် မမ တောင်းပန်ပါတယ် ညီမလေးရေ။
Posted by လရိပ်အိမ် at 12:55 PM5comments:
အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်မှသည် ပင်လုံစာချုပ်ဆီသို့ ....